Oke mmiri ozuzo na-ebibi obodo nta, merụọ ọtụtụ narị na Czech Republic
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Czechia » Oke mmiri ozuzo na-ebibi obodo nta, merụọ ọtụtụ narị na Czech Republic
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa na Czechia • News • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ihe karịrị mmadụ 150 ka akọpụtara na ha merụrụ ahụ, ebe “ọtụtụ narị” ndị uwe ojii na ndị na-aza ajụjụ izizi ozi ezigala ndịda Moravia.
Oke ikuku nwere ike ịbụ F3 ma ọ bụ F4 na ọkwa Fujita.
Oke mmiri ozuzo bụ ike ifufe kachasị ike na akụkọ ntolite Czech na nso nso a na-enweghị atụ na Europe.
Akụkọ banyere mmerụ ahụ na mmebi emebi ka na-abata.
Otu udi F3 ma obu F4 oke ikuku dara na Czech RepublicObodo dị n'akụkụ Czech-Slovak, na-emebi ọtụtụ obodo Moravian na ndịda ọwụwa anyanwụ Czechia. Ihe karịrị mmadụ 150 ka akọpụtara na ha merụrụ ahụ, ebe “ọtụtụ narị” ndị uwe ojii na ndị na-aza ajụjụ izizi ozi ezigala ndịda Moravia.
Vidio na-ekesa na mgbasa ozi mgbasa ozi weghaara mmiri ahụ na-emetụ ala n'etiti Breclav na Hodonin, na ndịda ọwụwa anyanwụ Czechia.
Onye isi obodo nke Hrušky, nke nwere otu puku mmadụ na narị ise, kwuru na ọkara obodo ahụ "lara n'iyi."
Ndị ọchịchị kwuru na ọnụọgụ ndị merụrụ ahụ n’agbata otu narị mmadụ na otu narị na iri ise, mana akụkọ banyere mmerụ ahụ na mmebi ka na-abata.
Dabere na otu ụlọ ọrụ TV Czech, ifufe nwere ike ịbụ F3 ma ọ bụ F4 na Fujita, na-egosi na ọ "mebiri" na "oke" mmebi. Ọkachamara n'ihe banyere ihu igwe Michal Žák kwuru na ọ bụ "ikekwe oke mmiri ozuzo kacha sie ike na akụkọ mgbe ochie [Czech]" na ọ bụ ihe a na-ahụkarị na Europe.
Ndị ọrụ mberede nke mpaghara adọọla ụmụ amaala aka na ntị ka ha ghara ịnọ n'èzí ma ọ bụ n'okporo ụzọ, ma kọwaa ọnọdụ ahụ dị ka "ụlọ ndị mebiri emebi, ọkụ, ihe mberede okporo ụzọ, osisi na ụgbọ ala na ụlọ."
Ndị uwe ojii Czech gbara ndị mmadụ nọ n'okporo ụzọ ume ka ha “mezie ụzọ” maka ha.
Oge ikpeazụ achọpụtara oke mmiri ozuzo na Czechia bụ Mee 2018. Nke ahụ bụ ihe omume F0 nke metụtara ọtụtụ ala ubi na mpaghara Plzen, na-ebute enweghị mmerụ ahụ.
Qatar Airways na-agbasa netwọkụ US ihe karịrị 100 kwa izu ...